Scabies – Healthy Life Journal
All posts tagged "Scabies"
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အနာဖေးက ကြည့်လို့မကောင်းပေမယ့် ဒါက အရေပြားကို ကူးစက်ပိုးမ၀င်စေဖို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသလို အရေပြားတစ်သျှူးသစ်အနေနဲ့လည်း ဖုံးအုပ်ပေးထားတာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အနာဖေးတွေက ရက်အနည်းငယ်ကနေ သီတင်းပတ်ကြာတဲ့အထိ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာအရွယ်အစားနဲ့ ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အနာကျက်ချိန် ကြာတတ်ပါတယ်။...
Q. လက်ချောင်းကြားမှာ ၀ဲပေါက်ပြီး ပျောက်တာကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုထိယားနေတုန်းပဲ။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ KKM (FB) ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. ၀ဲကပျောက်ပြီးရင်တောင် အချိန်အတော်ကြာကြာ ယားနေတတ်ပါတယ်။ ၀ဲကူးပြီးတဲ့လူနာတွေက ၀ဲကိုသေသေချာချာ ကုသပြီးရင်တောင်...
မေး ။ လူအများနဲ့ ရောနေရပါတယ်။ တချို့က ၀ဲပေါက်တဲ့သူပါတယ်။ အဲဒါ ၀ဲမပေါက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်ပါသလဲ။ ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော်(အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ၀ဲမပေါက်အောင် ကာကွယ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့- တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ အ၀တ်အစား၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ၊...
လက်မှာ ဖြစ်တတ်သည့် ယားနာများ
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (ပါမောက္ခ၊ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. လက်မှာယားနာဖြစ်တဲ့အခါ ဘာတွေကို ဆင်ခြင်ရမလဲ ဆရာမ။ A. လက်မှာ ယားနာဖြစ်တဲ့အခါ ဆပ်ပြာနဲ့ရေကို လျှော့ကိုင်ရပါမယ်။ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေက အရေပြားရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ အရေပြားထိခိုက်လွန်းတာ၊...